အလွန်အေ၇းပါသည့် စီးပွားရေးအချက်အလက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. စားသုံးသူများ၏ သုံးစွဲမှုပမာဏအချက်အလက်များကို အစောဆုံးသိရှိနိုင်သည့် တိုင်းပြည် ဂျီဒီပီကို ခန့်မှန်းတွက်ဆနိုင်မည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ယခုနှစ်အတွင်းတွင် သြဇီဒေါ်လာမှာ ဖိအားများအောက် ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီး အကယ်၍ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါက ပိုမိုတန်ဖိုးကျဆင်းလာနိုင်ပါသည်. လတ်တလောအချိန်အတွင်းတွင် သြဇီဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် အတိုးနှုန်းတင်နိုင်ခြေမရှိသေးသော်လည်း ယခုဒေတာ အားကောင်းပါက AUDအတွက်ပါ အားကောင်းလာစေနိုင်ပါသည်. ဧပြီ ၄ရက် ၄:၃၀ MTအချိန်တွင် ဒေတာကို စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ.